» Daawo 55 Jir Ka yaabisay dalxiisayaal.
Daawo 55 Jir Ka yaabisay dalxiisayaal.
Nov 1, 2012 - jawaab	Aqrisatay:3509Wabiga Nile ee dalka Uganda ayaa haweenay 55 jir waxa ay si mucjiso leh u tustay dad badan oo ka mid ahaa dad halkaasi dalxiis u tagay, kaddib markii ay ka soo booday meel aad u dheer oo ka sareysa biyaha cabir ahaan 44 metres.
Dadka daawanayay ayaa waxaa ka mid ahaa gabadh ay dhashay, waxa ayna gabadha ka qaadaysay Hooyadeed kamiro xasuus ah arrintan ayaa dhaamaan dadkii halkaasi joogay af labadiis yeereen markii ay arkeen Islaantan meesha dheer iska soo tuureysa.
RIIL HALKAAN SI AAD U DAAWATO MUUQAALKA
Haweenayadan isku soo tuurtay biyaha wabagiga Nile ayaa ujeedadeeda ku sheegtay in ay tusaysay dhalinta haatan jirta in ay jiraan waayeel ka firfircoon o ka ada adag.
By: Saabir Elmi Yuusuf